Thursday November 07, 2019 - 17:30:33 in Articles by Hadhwanaag News
Baryahan dambe xisbiyadeena qaranka ee Waddani iyo UCID waxa ay aad uga hadlaan Somaliland
la wada leeyahay ayaan rabnaa. Waa arrin wanaagsan in laga hadlo waayo danta dalka iyo dadka ayaa ku jirta in la helo caddaalad dadka wada deeqda. Anigoo qaddarin badan u haya xisbiyada mucaaradka ah waxan doonayaa in aan maanta runta u sheego. Waa muhiim in xisbiyada mucaaridku dawladda runta u sheegaan oo waliba ay shacabkana u iftiimiyaan wixii ka qaldama dawladda si loo saxo. Laakiin intaanad sheegin takarta maroodiga kale saaran waxa wanaagsan in aad horta eegto takarta adiga ku saaran.